Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Premier League Ee West London Derby Ee Kooxaha QPR v Chelsea. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Premier League Ee West London Derby Ee Kooxaha QPR v Chelsea.
Ka hor kulankaan inta uusan bilaaban waxaa hareynaya arinta ku saabsan xiriirka xun ee ka dhaxeeya kabtanka Chelsea John Terry iyo daafaca QPR Anton Ferdinand. Iyadoo Terry ay ku socoto dacwad isboorti oo la xiriirta inuu ereryo cunsurinimo leh ku aflagaadeeyay Anton Ferdinand.
Waxaa si aad ah loo hadal hayaa isgacan qaadka labada ciyaaryahan inuu dhici doono iyo in kale, halka sidoo kale la sheegayo in qaar ka mid ah ciyaartoyda QPR ay go’aansadeen inaysan salaamin Terry ka hor ciyaarta.
Kulanka: QPR v Chelsea
Garoonka: Loftus Road Stadium
LINE-UPKA MACQUULKA AHQPR
Wright-Phillips, Granero, Faurlin,� Park
Ramires,� Mata,� Hazard
Walaaca kaliya ee ay QPR qabtay kulankaan ka hor waxa uu ahaa daafaca Anton Ferdinand oo dhibaato ka qabay garabka, laakiin waxa ay u badan tahay inuu ka soo kabsaday oo uu ku soo bilaaban doono kulanka ay kooxdiisa maanta martigelineyso Chelsea.
Mark Hughes ayan heysan dhaawac cusub oo uu ka walwalo ama cid ganaax kaga maqan, waxaana laga yaabaa inuu Nedum Anouha ka garab ciyaarsiiyo Ferdinand ka dib markii Ryan Nelsen uu labo kulan u ciyaaray New Zealand ciyaarihii caalamiga.
Dhinaca kale labada ciyaaryahan ee Chelsea John Terry iyo Ashley Cole oo labadooda dhaawac uu ka soo gaaray canqowga intii ay la maqnaayeen England ayaa tababarka Chelsea ku soo laabtay, waxaana la filayaa inay ciyaari doonaan kulanka QPR ee Loftus Road ka dhacaya maanta.
Marko Marin ayaa weli la dhibtoonaya inuu ka soo kabsado dhaawaciisa, sidaasi darteed waxa ay u badan tahay inuusan kulankiisii ugu horeeyay u ciyaari doonin Chelsea weli.
Tababaraha Chelsea Roberto Di Matteo ayaan heysan dhaawac kale oo uu ka walwalo ka hor kulanka West London Derby.
Guuldaradii QPR ka soo gaartay Swansea ee 5-0 ayaa soo gabagabeysay shan guul oo isku xigta oo ay ku gaareen QPR garoonkooda Loftus Road.
Mark Hughes ayaa kaliya labo jeer guul ka gaaray kooxdiisa hore ee Chelsea isagoo tababare ah 14 kulan oo uu ka horyimid.
Guushii Chelsea ee 6-1 ay ka gaareen kooxda QPR bishii Aprill ayaa aheyd markii labaad ee QPR laga dhaliyo lix gool hal kulan oo Premier League ah, iyadoo Fulham ay tahay kooxda kale ee lix gool ka dhalisay iyaga bishii October 2011.
Bobby Zamora ayaa 11 kulan ka horyimid kooxda Blues, lakiin marnaba shabaqa kama uusan soo taaban.
Chelsea ayaa aheyd kooxdii ugu xumeyd kulamadii London Derby ee kooxaha caasimada ka dhisan oo dhan ay ciyaareen xilli ciyaareedkii hore, madaama ay heleen dhibcihii ugu yaraa.
Chelsea ayaa badisay kaliya labo kulan oo ka mid ah 10kii kulan ee ugu danbeysay ee ay marti ahaayeen Premier League, waxa ay barbaro galeen afar jeer waxaana laga badiyay afar jeer.